"Isaorana anie ny Tompo, Izay mitondra ny entantsika isanandro isanandro, eny, Andriamanitra Izay famonjena antsika." Salamo 68:19
Ry kristiana, rehefa ampoky ny fanomezan’Ilay Andriamanitra Raintsika ve isika, mba misaotra Azy isanandro noho ny fanampiany, ny fanatrehany ary ny fahasoavany? (Hebreo 13:5-6).
-Ny fanampiany: Milanja vesatra ve isika, be fanahiana, manana olana mampiferinaina? Resaho amin’Andriamanitra izany, amin’ny alalan’ny vavaka feno fahatokiana. Te hanala izany zava-mitambesatra amintsika izany Izy, ary te hiara-mitondra izany amintsika. Olana inona moa no mety tsy ho hain’Ilay Andriamanitsika vahana? Afaka manome vahaolana Izy, eo amin’izay toa maha tapi-dalan-kaleha antsika. Afaka manome hery sy faharetana ihany koa Izy.
-Ny fanatrehany: “Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” (Matio 28:20). Tsy irery mihitsy isika. Momba antsika isanandro Jesosy Kristy. Eo Izy rehefa miaina zava-mahafinaritra isika. Miaraka amintsika ihany koa Izy, rehefa sarotra ny asa atao. Misy maneso ve isika? Miaraka amintsika Izy, mba hampahery antsika.
-Ny fahasoavany: “Eny tokoa, fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako” (Salamo 23:6). Isanandro isika dia afaka mangataka ny fahasoavan’Ilay Mpiandry tsara. Raha solafaka isika dia averiny ho eo aminy, asainy mandre ny feony amin’ny famakiana ny Tenin’Andriamanitra. Raha toa isika tsy maintsy miaritra ny vokatry ny nataontsika, izay nampanalavitra taminy, ny fahasoavany no manampy antsika hanaiky sy hizaka izany isanandro. Ny hahasitrana antsika no tadiavin’Ilay Mpiandry tsara, ka ny fahasoavany no mitsinjo mialoha ny fahalementsika. Ampy izany, ho an’ny tranga rehetra iainantsika. Azontsika averimberina amintsika mandrakariva ny tenin’ny Tompo hoe: “Ampy ho anao ny fahasoavako” (2 Korintiana 12:9).